Sauna Ụlọ Ifuru infrared China Manufacturer
Nkọwa:Igwe ihe nkiri na-ekpo ọkụ sauna,Nnukwu ihe nkiri na-ekpo ọkụ na Sauna,Ngwá ọrụ Igwefụfụ nke infrared infrared
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Na-egosi ihe nkiri sauna > Sauna Ụlọ Ifuru infrared
Ihe Nlereanya.: XHC-F049
A na-ejikarị ya saa okpomọkụ nke infrared Saa, Infrared Sauna Dome, Ụlọ elu Yoga nke dị elu, ọwa mmiri na-ekpo ọkụ wdg. ihe nkiri ikpo ọkụ, ntutu anya na-ekpo ọkụ ọkụ.
Sauna Room infrared okpomọkụ
2. Ngwaahịa na-eji carbon emepụta, na ọrụ Far Infrared.
3. Enwere ike ịme ihe ngosi dị ka arịrịọ gị, dịka voltage, ike, size, okpomọkụ etc.
4. Anyị na-ahọrọ mba ndị dị na Raw maka ngwaahịa anyị, iji hụ na ngwaahịa anyị dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% pasent mgbe ọ na-ebugharị.
5.Emeela ka anyị nwee ike ịhazi usoro ISO9001 ma nyefee ya000000 na OHSAS18000.
6. Ngwaahịa niile mgbe ị bịarutere, anyị ga-enye gị ọnụahịa kachasị ala.
Voltage ọsọ ọsọ: AC 220V
Nguzogide mbụ: 271-300Ω , nkwụsi ike 285Ω ( nkwụsị plasma ọla edo n'ime 4Ω )
Ike: 170W ± 5%
elu voltaji na-eguzogide: 3750V 5mA 5s ( aluminum foils )
5.Achaa 10mins electrify 275V na Onyonye-kọntaktị N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị ihe igwe
Biko nye anyi ndụmọdụ n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka ịchọta ihe ngwọta kacha mma gị. size, max okpomọkụ, voltaji, wattage, Ngwa
edozi ihe na-edozi ọkụ saa ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Onu ogugu kpo oku nke infrared Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ihe nkiri na-ekpo ọkụ sauna Nnukwu ihe nkiri na-ekpo ọkụ na Sauna Ngwá ọrụ Igwefụfụ nke infrared infrared Ihe nkiri na-ekpo ọkụ sauna Igwe ihe nkiri na-ekpo ọkụ na Snow Snow Kpochapu ihe nkiri na-ekpo ọkụ saa Igwe ihe na-ekpo ọkụ Ihe nkiri na-ekpo ọkụ sauna maka ire ere